TSINJO FAMENO CNAPS : Vola 6,4 miliara ariary no havoaka, orinasa 128 nangataka – Free News
samedi, 29 janvier 2022 - 1:53
Accueil/Fanadihadiana Manokana/TSINJO FAMENO CNAPS : Vola 6,4 miliara ariary no havoaka, orinasa 128 nangataka
Araka ny efa nambaran’ny Filoham-pirenena ombieny ombieny, mitady hevitra hatrany izy sy ny governemanta tarihiny amin’ny fanampiana ny olona sahirana noho ny « Hamehana ara-pahasalamana ». Noho izany, vola 6,4 miliara no havoaka ao amin’ny alalan’ny «Tsinjo Fameno » Cnaps. Taratasy fangatahana miisa 24.213 avy amina orinasa 128 no efa voarain’ny tompon’andraikitra amin’izany.
Rado Harivelo 25 août 2020
Ireo mpiasa tsy miankina no lohalaharana amin’ity fanampiana ity.
Notsorina ny fisoratana anarana amin’izany Tsinjo Fameno izany ho an` ireo mpampiasa. Marihina fa ny mpampiasa ihany no afaka manoratra anarana ireo mpiasa ao aminy ka hanao izay findramam-bola izay. Miditra ao amin` ny tranonkalan` ny CNaPS, avy eo miditra ao amin` ny « espace employeur » ka no mametraka fangatahana. Ny fepetra takina kosa, mila mpampiasa efa mpikambana ao anatin` ny herintaona, izay nanomboka ny 1 janoary 2019 fahafahaingany. Tokony ho orinasa marim-pototra ao anatin` ny sehatra misy azy sy ara-dalàna ara-ketra amin` ny latsakemboka sy karama ara-dalàna. Ny mpiasa kosa, raha manana fifanekana arakasa tsy voafetra (CDI) ny mpiasa iray. Raha tsia, mila manana fifanekana arak`asa hatramin` ny desambra 2021 (CDD).
Nanomboka ny alatsinainy 17 aogositra ka hatramin` ny 30 septambra izao ny hetsika Tsinjo Fameno. Ny Filoham-pirenena nandritra ny lahateniny efa nanamafy ny isan’ny taratasy sy ny orinasa voaray. Mbola hitombo io tarehimarika io satria mbola mitohy ny fandraisana ireo antontan-taratasy amin’izao fotoana izao. Marihina fa vola hindramina ity Tsinjo Fameno ity ka amin` ny alalan` ny latsakemboka arotsaka eny anivon` ny CNaPS no hanonerana izany mandritra ny 12 volana ary manomboka ny volana janoary 2021. 200 000 ka hatramin’ny 500 000 ariary no azo hindramina.
Efa maro ny taratasy voaray fangatahana ao amin’ny CNaPS.
Natao ho an’ny mpiasa tsy miankina
Fanampiana manokana amin’ny ady amin’ny Covid 19 ny « Tsinjo fameno », izay natao ho an’ireo mpiasa amin’ny sehatra tsy miankina manara-drafitra. « Ny CNaPS dia mandray ny fangatahan’ireo rehetra izay manao izany, fa ho fandaminana dia misy ireo sehatra natao ho «prioritaire » izay noheverina fa tena sahirana dia ny : Fampianarana, Fizahantany, Orinasa afaka haba, Fitaterana », hoy ny fanazavan’ny tompon’andraikitra ao amin’ny CNaPS. Ny mpampiasa no manoratra ny anaran’ireo mpiasa izay hanao ilay findramam-bola ao amin’ny site web www.cnaps.mg. Findramam-bola mitovy sanda amin’ny karama raisina isam-bolana, izay tsy mihoatra ny 200 000 ariary farafahakeliny ary 500 000 ariary farafahabetsany. Ary averina ao anatin’ny 12 volana manomboka ny volana janoary 2021, alaina amin’ny karama isam-bolan’ilay mpiasa amin’ny taha 0%. Natokana ho an’ny mpiasa tsy miankina niharan’ny « chômage technique » na « réduction de temps de travail », mikarama 200 000 ar no ho miakatra ity «Tsinjo Fameno » ity. « Ny fepetra afaha-misitraka izany ho an’ny mpiasa dia niasa herintaona talohan’ny desambra 2019, CDD na CDI, mpikambana aty amin’ny CNaPS. Ho an’ny mpampiasa kosa, orinasa nijoro herintaona fara fahakeliny talohan’ny desambra 2019. Nahaloa latsakemboka ara-dalàna na nandefa DNS ara-dalàna taty amin’ny CNaPS. », hoy ny fanazavana ihany.
Mikaro-bahaolana hanampiana ny vahoaka ny Fanjakana
Manoloana ny ady amin’ny valanaretina sy ny fiatrehana “Hamehana ara-pahasalamana”, dia miantraika mivantana amin’ny orinasa, ny mpiasa ary ny fiainan-tokantrano ny fianakaviana ny ady amin’ny valanaretina covid-19. Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, nandritra ny tafa nataony, tamin’ny vahoaka malagasy, ny alahady lasa teo, fa nisy ny fikarohan-kevitra hahafaha-manampy ireo olona miato tamin’ny asany. 52 miliara no natokan’ny Fanjakana ireo mpiasa, izay misoratra ara-dalàna amin’ny CNaPS. 2 hetsy ka hatramin’ny 5 hetsy ariary, araka ny voalaza etsy ankilany, ny vola azo indramina. “Tsy misy ny zana-bola fa ny Fitondram-panjakana no hanefa izany amin’ny Banky. Misy ny mangataka sy miantso ny amin’ny tsy tokony hamerenana azy. Raha ny faniriana dia omena daholo, saingy mila mifampitsinjo”, hoy ny Filoha. Nasongadiny fa raha vantany vao hiasa ilay olona nindram-bola, tsy avy hatrany dia handoa trosa.
Marobe ireo mpiasan’ny afakaba no hisitraka ny “Tsinjo Fameno”.
Na izany aza, efa miverina tsikelikely amin’ny asa isika, ka tsy ho amin’ity taona ity no hanefa io vola nindramina io ireo olona fa amin’ny farany volana janoary 2021 ka hatramin’ny desambra 2021. Ny Fitondram-panjakana no mandoa ny zana-bola. Ireo olona mandoa Cnaps ara-dalàna no hisitraka izany fampindramam-bola tsy misy zana-bola izany. Marobe ireo efa niroso tamin’ny fanohanana amin’ny findramam-bola io, isan’ireny ny mpiasan’ny Air Mad, ireo orinasa afakaba, mpampianatra amin’ny sekolim-pinoana, ny sekoly FJKM, ny sekoly katolika sy ny sekoly FLM, ankoatra ireo sekoly tsy miankina, raha ny nambaran’ny Filoha hatrany.
Miahiahy sao tsy hahazo…
Raha ny fanadihadiana nataonay tamin’ireo olona niato tamin’ny asany vokatry ny “Krizy ara-pahasalamana” dia nanambara fa tonga amin’ny tena ilainy tokoa izao fanampiana ho an’ny mpiasa, amin’ny alalan’ny fampindramam-bola “Tsinjo Fameno”. Na izany aza, maro ireo niahiahy sao tsy hahazo satria misy tamin’ireo orinasa sasantsasany no tsy nahaloa na tara any fandoavana latsakemboka teny amin’ny CNaPS. “Maniry dia maniry mihitsy aho ny hindram-bola amin’ilay “Tsinjo Fameno” nambaran’ny Filoha iny. Saingy, miahiahy aho sao tsy hahazo satria tsy fantako mazava na naloan’ny toeram-piasanay ny resaka latsakemboka tany amin’ny CNaPS. Ireny iaraha-mahalala ireny, fa na miasa aza izahay, dia tapak’andro maraina ihany ary zara raha nandray antsasa-karama nandritra ny roa volana”, hoy i Narindra mpiasa amin’ny orinasa afakaba iray. Nohazavain-dRatsimbaharison Alain Désiré, Talen’ny serasera eo anivon’ny CNaPS fa
“ny fepetra tsy maintsy jerena ho an’ny mpampiasa sy ny mpiasa. Ho an’ireo ara-dalàna amin’ny fandoavana latsakemboka eo anivon’ny Cnaps dia tsy misy ny olana. Ho an’ireo tsy ara-dalàna, dia hojerena ao anatin’ny fotoana fohy, izany hoe, anatin’ny adiny roa aorian’ny hisoratana anarana ao amin’ny tranonkalan’ny Cnaps dia hovahana ny olan’ireo izay tsy milamina. Isan’ireny ny filazan-karama na latsakemboka tsy voaloa. Jerena ny fomba ampanarahan-dalàna izany”.
Ho an’ireo latsakemboka tsy voaloa dia tsy maintsy jerena ny hametrahana datin’andro fanekena latsakemboka, izay tsy voaloa. Tanjona amin’izao koa ny handehanan’ireo mpiasa amin’ny ara-dalàna.